အဘယ်သို့ငါ RentaCar Club အပေါ်မှာငါ့ဝင်ငွေရရှိမှုတိုးမြှင့်သလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်သည်သင်၏ကားကိုစာရင်းပြုစုတဲ့အခါမှာသင်အကြံပြုစျေးနှုန်းသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။ ဒါဟာစျေးနှုန်းကိုဂရုတစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကုများကတွက်ချက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပိုပြီးမှာယူမှုများနှင့်သင်တို့အဘို့ထိုကြောင့်, ဝင်ငွေရရှိမှုကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးအပြိုင်အဆိုင်အနားပေးသင့်ပါတယ်။
သင်မြို့လယ်မှဘယ်လောက်နီးကပ်ပေါ် မူတည်. စျေးနှုန်းမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
updated သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, > ကျွန်မရဲ့ကားများအကြှနျုပျ၏စာရင်း> ပြက္ခဒိန်: သင်ပေါ်တွင်သင်၏ပြက္ခဒိန်မွမ်းမံနိုင်ပါသည်
ပြက္ခဒိန်၏ရက်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရရှိနိုင်မှမရရှိနိုင်ပါကနေ status ကိုများနှင့်အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်ငှားရမ်း၏တည်နေရာမှပေးပို့နှင့်မော်တော်ယာဉ်ပစ်ကပ်ပူဇော်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, (ဒါမှမဟုတ်လေဆိပ်မှာ) အခမဲ့သို့မဟုတ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းကြေး, ကိုယ်စာရင်းအတွက်ဒါကိုသတ်မှတ်ပါ။
သင်သည်> ပေးပို့စာရင်းများကိုစီမံကွပ်ကဲ> ကြှနျုပျ၏ကားများသွားနေဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပစ်ကပ်ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်နိုင်ပါတယ်
ဓါတ်ပုံတွေကိုသွား upload ရန်:> ဓါတ်ပုံများစာရင်းများကိုစီမံကွပ်ကဲ> ကြှနျုပျ၏ကားများ
သင့်ကားဖော်ပြပါ: ငှားရမ်းသူတို့လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ကိုယ်အဘို့နှင့်သင်၏ကားကိုတစ်ပြီးစီးခဲ့ပရိုဖိုင်းရှိသည်။ ယင်း၏အားသာချက်များအပေါငျးတို့သထွက်ထောက်ပြတာပါ။ ထိုကဲ့သို့သော Ipod ပေါက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အသံစနစ်ကဲ့သို့သင်တို့ကဆက်ပြောသည်ပြီသင့်ကားသို့မဟုတ်အထူးအင်္ဂါရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရယ်စရာပုံပြင်များ, ပြောပြပါ။ ဒီနေရာမှာသင့်ကားများ၏ဖော်ပြချက်ပြောင်းနည်း: ငါ့အကားများ>> အသေးစိတ်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲရန်
အကောင်းဆုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရဖို့သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ: သူတို့တစ်တွေကားကိုစာအုပ်ဆိုင်မှဆုံးဖြတ်ခြင်းနေတဲ့အခါဒီငှားရမ်းဘို့တွေအများကြီးမှတ်တော်မူ၏။ သူတို့ကအခြားလူရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုယုံကြည်စိတ်ချလေ့ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအပြုသဘောဆောင်သည့်ငှားရမ်းအတွေ့အကြုံကိုကြိုးစားပါစေ။ တစ်ခုမှာကောင်းသောအစွန်အဖျားဟာငှားရမ်းဖို့ပေးပို့ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်; ဒီကျိန်းသေကောင်းတစ်ဦးအထင်အမြင်စွန့်ခွာမည်!
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးပြု. သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူသင့်ကား Share! သင့်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ, Twitter Instagram ကို, အီးမေးလ်ကိုသုံးပါနှင့်အခြားသူများကအကြောင်းသိကြကုန်အံ့။